Usayizi waphansi: 2450.259 Sq feet
Sikunikeza iNdlu efanelekile ukuthi uyithenge. Hlola yonke impahla ongayicela eNyakatho Nazimabad - uBlock H. Umthengisi usethe intengo ebuzwayo enengqondo kakhulu ku-Rs 30,000,000. Thenga impahla yakho namuhla ukuze uvikele ikusasa lakho. Impahla yamaYadi wama-225 oyifunayo manje isilapha. Kahle kahle eNyakatho Nazimabad, leli ithuba lokutshala imali elingenakuqhathaniswa nelinye. Sibuze okuningi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikeziwe.
Xhumana nomkhangisi +92345206xxxx